Qt iri kufunga kuburitsa yemahara vhezheni gore rakanonoka | Linux Vakapindwa muropa
Pakutanga kwegore isu tinogovana pano pa blog nhau nezve sarudzo iyo yavakanga vatora "Qt Kambani" mavakazivisa shanduko kune ako marezinesi mamodheru uye kuti vakazivisa kuti iyo Qt yekutsigira-kwenguva refu edition inongowanikwa chete mune zvekutengesa marezinesi.
Izvi zvisati zvaitika Vagadziri ve projekiti ve KDE vakaratidza kunetseka nekuchinja kwekuvandudzwa kweiyo Qt fani kuenda kune yakashomeka yekutengesa chigadzirwa chakagadzirwa pasina kudyidzana nenharaunda.
Pamusoro pechisarudzo chiri pamusoro kuendesa iyo LTS vhezheni yeQt chete pasi pekutengesa rezinesi, Qt Kambani iri kufunga shanduko yemhando yekuparadzira Qt, mune kuti shanduro dzese dzichagovewa chete kune vekutengesa marezinesi vashandisi mukati memwedzi gumi nembiri yekutanga.
Uye iyi yese Qt Kambani yakashumwa ku KDE eV, inotarisira kusimudzira kwe KDE.
Kana chirongwa chiri kutaurwa chikaitwa, nharaunda inongokwanisa chete kuwana shanduro nyowani dzeQt gore rimwe mushure mekuburitswa kwavo chaiko. Mukuita, danho rakadai rinogumisa mukana wekupinda kwenharaunda mukuvandudza Qt uye kuita sarudzo zvine chekuita neprojekiti, izvo zvakapihwa neNokia pasi pechirongwa cheOver Governance.
Iko kudiwa kwekuwedzera pfupi-pfupi mari kuti ugare wakadzika semhedzisiro yedambudziko rinokonzerwa nedenda rekonavirus inotaurwa sechikonzero yekuwedzera kunogona kuitika mukutengesa kweprojekiti.
ari Vagadziri ve KDE vanovimba Qt Kambani ichachinja pfungwaAsi hazvingarambidze kutyisidzira kunharaunda, uko vanogadzirira Qt ne KDE.
Kana uchitaurirana nebhodhi revatungamiriri vesangano re KDE eV, Vamiriri veQt vakaratidza kuda kwavo kufunga nezvavanovavarira, asi mukupindura vaida kumwe kubvumirana mune dzimwe nzvimbo. Nekudaro, kutaurirana kwakafanana kwakaitwa kuvandudza chibvumirano mwedzi mitanhatu yapfuura, asi iyo Qt Kambani yakavabvisa kamwe kamwe uye yakatemerwa kuburitswa kweQT LTS.
Zvakare, kubatana pakati penzvimbo yeKDE, Qt Project, uye Qt Kambani kusvika ikozvino kwave padhuze uye kunobatsira. Kubatsira kweQt Kambani kwaivaka nharaunda hombe uye ine hutano yakakomberedza Qt, kusanganisira vanogadzira application, vechitatu-bato Qt vanogadzira, uye nyanzvi.
Kubatana pamwe nenharaunda yeKDE yaive mukana wakanaka kushandisa chakapedzwa Qt chigadzirwa uye kutora chikamu zvakananga mukusimudzira kwayo. Iyo Qt Project yakabatsirwa kuve nemubatsiri mukuru mukusimudzira uye kuvapo kwenzvimbo huru inotsigira chirongwa ichi. Kana sarudzo yekumanikidza kupinda kweQt ichibvumidzwa, ipapo kubatana kwakadaro kuchamiswa.
Iyo KDE chirongwa chakave nechokwadi chekuti Qt inogona kuve chigadzirwa chakazara chechokwadi kuburikidza neiyo KDE Yemahara Qt Foundation, iyo yakagadzirirwa kuchengetedza nharaunda kubva kungangoita mutemo shanduko maererano nekuburitswa kweQt sechigadzirwa chemahara.
Chibvumirano cha1998 pakati peKDE Yemahara Qt Foundation naTrolltech, iyo inoshanda kune vese varidzi venguva yemberi yeQt, inopa chirongwa cheKDE mvumo yekuwanisazve rezinesi kodhi yeQt pasi pechero rezinesi rakavhurika uye nekuenderera mberi nekuzvigadzira pachayo kana mutemo uchipa mvumo, muridzi kubhuroka, kana kumiswa kweprojekti. budiriro.
Chibvumirano chazvino pakati peKDE Yemahara Qt Foundation uye Qt Kambani zvakare masimba ekudhinda shanduko dzese kuQt pasi peirisensi yakavhurika, asi bvumira kunonoka kwemwedzi gumi nembiri, iyo Qt Kambani inotarisira kushandisa kuwedzera mari yayo.
Izvo zvaida kuitirwa kubvisa nguva ino kunonoka muchinyorwa chitsva chechibvumirano, asi chibvumirano chitsva chakatadza kubvumidzwa. Kune chikamu chayo, KDE yaive yakagadzirira kupa Qt Kambani nemimwe mikana kuwedzera mari, senge kugona kugovera Qt kits neyakawedzera software uye kugona kubatanidza neyechitatu-bato kunyorera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Qt iri kufunga kuburitsa yemahara vhezheni gore rakanonoka
super critical akadaro
Makore apfuura neNokia N8 uye nechido chikuru, ndakagadzira chishandiso neQt ine vavariro yekutengesa. Panguva iyoyo, ndakanyatsoronga kuivhura uye kuenda kune rezinesi rekutengesa kuti ndipe, nguva yandakadzorera mari. Idzo dzaive nguva dzandakauya kufunga kuti Nokia yaive yakanaka. Uye wham vanababa vakatengesa kuMicrosoft uye ini ndakarova "Coffin Dance" mukutonga kuzere. Ndakarasikirwa nemari yakawanda, yakawanda. Ndakagadzirisa zvekare chikumbiro asi zvaireva kusvika nguva dzaenda. Ikozvino nekuda kwezvimwe zvikonzero kunze kweizvi, ini ndaifanirwa kubvisa Qt uye QML tekinoroji kubva kune yega uye yekutengesa kunyorera uye kuitsiva neimwe matekinoroji. Pandakatanga shanduko iyi, ndakafunga, zvirinani kuti ava vachiri kuzviitira iwe, ndinoona kuti handina kunge ndakanganisa, uye handikwanise kubhadhara rezinesi izvozvi vakadzi nemapati uye ndosaka vasingatipe. kubhadhara marezinesi avo, ona kusagadzikana kwangu panguva iyo inofungidzirwa Union EU ine zvishoma). Chikamu chakaomesesa chave kubvisa QML asi bvunzo dzekupedzisira dzakandikurudzira zvakanyanya nekuti yakwanisa kuitsiva ne 100% yemahara matekinoroji uye ini ndakatokwanisa kuwana kukurumidza kwakawanda, kwave shanduko yakanaka, yakaoma kwazvo, asi zvakanaka kwazvo. Ndakagara ndichishandisa C ++ / Qt uye handishaye ini ndinogadzira chero bhuku pasherufu yangu yekundiverengera uye kuva neQt, panguva imwe chete, ndakashandisa KDE ini ndinofunga kubva pakutanga, asi ndaneta nazvo nguva dzese kuve pasi pechishuwo che niches dzakaparadzwa nekuti Ivo havawani mari ye tesla yavo, nekuti ivo zvipenyu. Ivo vari kutora iyo pfuti mune yakakurumbira tsoka yepasirese software yemahara, ivo vanozoona kuti ivo vakangwara kwazvo. Asi hazviite kuti ndirasikirwe nemari zvakare. Uye ikozvino zvandiri kugutsikana kwazvo neshanduko yekubvisa Qt uye kune rimwe divi ndinoona kuti, pakupedzisira, iyo Gnome desktop iri kumusoro kune zvandinoda kubereka uye yazvino vhezheni yakanaka kwazvo. Nomwoyo wose vapei c…. Qt / digia, handimbobata chigadzirwa cheQt muhupenyu hwangu uye ndinodemba makore ese aya huwandu hwemishumo uye zvigamba zvebug zvandakaita muprojekti.
Windows 10 icharatidza iyo "Linux" folda yeWSL munguva pfupi iri kutevera